> Resource > Free > Top 5 Best Video Editors VOB Free
Video maanta sixiddiisa hadda ka hawl yar ka badan abid mahad ogaaaday barnaamijyada software free video tafatirka heli karaa internet-ka. VOB Free video tifaftirayaasha guud ahaan ma aha sida casri ah sida barnaamijyada software badan ka qaalisan xirfadle in la iibsan karo shirkadaha sida Apple ama Microsoft. Laakiin dadka intooda badan kuwaas oo doonaya kaliya in ay sameeyaan qaar ka mid ah hawlaha tafatirka fudud iyo geliyaan si ay u YouTube ama ciyaaro waxaa dheeldheel u gaar ah, waxaa jira tiro ka mid ah doorashooyin fiican in laga helo internetka.
Jahshaka waa video furan-il iyo tafatirka iyo saamaynta nidaamka audio. Waxayna u shaqaysaa iyadoo dhufto ee kala duwan: Windows, Linux iyo Mac. Waxaa jira sidoo kale qaybood hagaajinta midabka, keying, iyo raadraaca, iyo diyaariyeen ah ee taageerada saxaafadda.
Kala duwan oo ah qaabab video taageeray;
Waxay bixiyaan fursadaha video tafatirka xirfadeed.
Adkaan kartaa bilowga ah si ay u bartaan.
MPEG Streamclip waa editor video lacag la'aan ah Mac iyo Windows. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan sida MPEG, VOB, PS, M2P, mod, VRO, DAT, MOV iyo ka badan (aan MPEG sida magaca uu tilmaamayo). Waxaad jari karaa, jar oo ay ku biiraan aad video files isticmaalaya software this. Ama dhigay gudaha / dibedda dhibcood oo aanay u dhexeeya files muxed iyo de-muxed. Ka sokow in, waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka mid qaab badalo videos mid kale oo kala soo bixi YouTube videos markaad Gashaan URLs bogga u galay.
Miyuu badhan glitched iyo Window.
Barnaamijkan gaar ah software ka qabtaa tiro badan oo ka mid ah qaabab video kala duwan. Waxaad soo dhoofsadaan kartaa nooc kasta oo ilo, la abuuro video ah oo gubi koobi DVD. Waxay leedahay video tafatirka kala duwan fursadaha oo ha idin geeyo jeexan badan, ku dar kala guurka, oo iyaga u abaalmarin mashruuca dhamaystiran.
Taageerada qaabab video kala duwan.
Advanced oo aadan ahaan sida dareen si ay u bartaan.
Mid ka mid ah fudud, laakiin sturdiest oo inta badan lagu kalsoon yahay nidaamka tafatirka VOB free internetka, Video Editor VideoPad waa hordhac ugu fiican ee video tafatirka bilowga ah. Muuqan interface dhamaystiran, double dhisay-in shaashadda si ay ku eegaan clips soo xulay iyo edit finalka, sidoo kale weli waxaad ku dari kartaa sawirada iyo shaashad bannaan iyo sidoo kale.
Freemake Video Converter sidoo kale noqon kartaa barnaamijka fudud video tafatirka waa dareen si ay u isticmaalaan iyo xulashada fiican ee qaababka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si fudud u jiidi oo hoos u video clips, darto saamaynta, dhawaaqa cusub iyo subtitles sidoo diinta aad video in qaabab kala duwan.
Badan oo Output Options.
Qaar ka mid ah maxkamad la dhaafi karin.
Ma doonaysaa qalab video tafatirka xirfad dheeraad ah? Wondershare Video Editor si weyn lagu talinayaa. Wuxuu ku siinayaa dhammaan qalabka video tafatirka ay ka mid yihiin goo, kala, dalagga, iwm dib markii sixiddiisa videos, aad u bedeli karaan videos in qaabab kala duwan, geliyaan si ay u YouTube iyo Facebook ama DVD gubi.